ကိုရီးယားစတိုင်အမြင့်အိတ်ကပ်အိတ်ကပ်အမျိုးသမီးများအတွက် Harem ဘောင်းဘီ
အရောင် ကြက်သွန်ဖြူ 1 မီးခိုးရောင်နက် ၁ Khaki 1 ကြက်သွန်ဖြူ2Khaki2အနက်ရောင်2မီးခိုးရောင်နက် ၁ အနက်ရောင် 1 အနက်ရောင်3Khaki3မီးခိုးရောင်နက် ၁ ကြက်သွန်ဖြူ 3
အရွယ် S XL L M XXL
apricot 1 / S apricot 1 / XL apricot 1 / L ကို apricot 1 / M က apricot 1 / XXL နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင် 1 / S ကို နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင် 1 / XL နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင် 1 / L ကို နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင် 1 / M က နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင် 1 / XXL Khaki 1 / S ကို Khaki 1 / XL Khaki 1 / L ကို Khaki 1 / M က Khaki 1 / XXL apricot2/ S apricot2/ XL apricot2/ L ကို apricot2/ M က apricot2/ XXL Khaki2/ S ကို Khaki2/ XL Khaki2/ L ကို Khaki2/ M က Khaki2/ XXL အနက်ရောင်2/ S အနက်ရောင်2/ XL အနက်ရောင်2/ L ကို အနက်ရောင်2/ M အနက်ရောင်2/ XXL နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင်2/ S ကို နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင်2/ XL နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင်2/ L ကို နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင်2/ M က နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင်2/ XXL အနက်ရောင် 1 / S အနက်ရောင် 1 / XL အနက်ရောင် 1 / L ကို အနက်ရောင် 1 / M အနက်ရောင် 1 / XXL အနက်ရောင်3/ S အနက်ရောင်3/ XXL အနက်ရောင်3/ XL အနက်ရောင်3/ L ကို အနက်ရောင်3/ M Khaki3/ XL Khaki3/ L ကို Khaki3/ M က Khaki3/ S ကို နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင်3/ L ကို နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင်3/ M က နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင်3/ S ကို Khaki3/ XXL apricot3/ M က apricot3/ S နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင်3/ XXL နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင်3/ XL apricot3/ XXL apricot3/ XL apricot3/ L ကို
ကိုရီးယားစတိုင်အမြင့်အိတ်ကပ်အိတ်ကပ်အမျိုးသမီးများအတွက် Harem ဘောင်းဘီ - apricot 1 / S backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
မှတ်စု: The size may have 2-3cm differences due to manual measurement. Please note when you measure. This is Asian Size, Asian sizes are 1 to2sizes smaller than European and American people. If you feel difficult to choose the size, you can feel free to contact me. we will give you some suggestions, but it is for your reference only.